Indlu entle elunxwemeni - I-Airbnb
Indlu entle elunxwemeni
UFernando unezimvo eziyi-24 zezinye iindawo.
Le ndawo yindawo efanelekileyo yokuhlala abahambi abafuna ukuphumla, i-ir ekhuthazayo yezinto ezinjengokusefa, ukuloba, i-volleyball, i-sandboarding phakathi kwabanye. Iflethi ineenkonzo eziliqela, ukuze iindwendwe zihlale kamnandi, inezinto ezintle emini nasebusuku. Abantu basekuhlaleni bafumana iindawo ezininzi zokusefa kunye neendawo ezinomtsalane kwindawo ye-Isthmus yaseTehuantepec Oaxaca yo funda ngenkcubeko yalo mmandla.
Le ndlu ibonakala kakuhle elunxwemeni, inekhitshi eliyi-2, inamagumbi okulala ayi-3, ineendawo ezisetyenziswa ngumntu wonke ezifana negumbi lokutyela, iofisi, iishawa, amagumbi okuhlambela ayi-3, anee-hammock eziyi-5, i-TV, izitulo, ukuphuma ngqo emotweni ukuya elunxwemeni, zonke zikwindawo ebiyelweyo nekhuselekileyo. Kwakhona le ndlu inechibi (Amanzi aseBrackish)
Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
Le ndawo yindawo ethe cwaka nepholileyo, ekhuselekileyo kunye neendawo ezintle onokutyelela kuzo. Indawo engaselwandle enamaza alungele ukusefa kunye nemigxobhozo yesanti. Kukho iivenkile zokutyela ukutya kwaselwandle kumanyathelo ambalwa ukusuka endlwini ukuya kufutshane nesixeko malunga nemizuzu eyi-15 ngemoto.
ndithumelele uWhatsApp 9Řwagen1798